LAMA FILAAN: Theirry Henry Oo Xiddigii Ugu Adkaa Ee Uu Kahor Tagay U Doortay Daafac Aanad Hore U Maqal - Laacib
HomeWararka CiyaarahaLAMA FILAAN: Theirry Henry Oo Xiddigii Ugu Adkaa Ee Uu Kahor Tagay U Doortay Daafac Aanad Hore U Maqal
Weeraryahankii hore ee kooxaha AS Monaco, Arsenal iyo Barcelona ee Theirry Henry ayaa daafac lama filaan ah u doortay ciyaaryahankii ugu adkaa ee uu kahor tagay waana xiddigii hore ee xulka Nigeria ee Taribo West oo ayba macquul tahay in aanad hore u maqal magaciisa.
Henry ayaa ah ciyaaryahanka ugu goolasha badan taariikhda Arsenal waxaana uu caan ku ahaa inuu nooc kasta oo qalalaase ah ku abuuro daafacyada kasoo horjeeda mudadii uu garoomada ku jiray heer kooxeed iyo heer qaran labadaba.
Henry ayaa soo kala dhantaalay qaar kamida daafacyada dhexe iyo daafacyada midig ee ugu wanaagsan dunida balse waxa uu aaminsan yahay in West uu ahaa daafacii dhibka ugu badan mariyay.
Henry oo la hadlayay CBSS Sports Golazo ayaa sidoo kale sheegay in ciyaaryahanka uu guud ahaan necbaa inuu garoonkaba kaga hortago uu ahaa khadkii dhexe ee Manchester United ee Paul Scholes oo uu dhawr mar ku sifeeyay khadka dhexe ee ugu fiican taariikhda.
“Ma waxaan kuu sheegaa midkii iigu adkaa ee aan si aan toos ahayn uga hortagay? amaba shaqsi aanad jeclayn inaan kahor tago? kaasi waxa uu ahaa Paul Scholes” ayuu yidhi Henry ugu horreynba.
“Ciyaaryahankii ugu adkaa ee aan si toos ah uga hortagay miyaa? waxaan dib ugu laaban doonaa maalmihii hore – Taribo West. Sababtoo ah (Auxerre) waxay samayn jirtay in ciyaaryahan kasta ciyaaryahan kale toos u raacdo, meelkasta ayuu kuu raacayay, xataa qolka labiska.”
Henry ayaa markii uu joogay Monaco kahor tagay West oo u ciyaarayay Auxerre halka markii uu Juventus u wareegayna uu West u wareegay kooxda Inter Milan.
Difaac aanad hore u maqal ha odhanine waxad tidhaahdaa difaac aan dhalinta yaryari garaneyn taribo west waan daawan jiray isagoo Nigeria u ciyaaraya iyo isagoo inter joogaba wuxuu difaac bir ah imakana Nigerian ayuu wadaad baadari ah ka yahay Ronaldo ayey inter uwada ciyaari jireen
Kkkk mohamed sxp masuulka sooqoray war bixintan asaga ayaan garaneynin taribo west. Rashid yekini iyo finidi george hadii laweydiiyo xataa ma uusan garteen ee haku qarxinin awooowe VART kadaa cml sxpoow